Usuku lokuzalwa luhlala liholide kubo bonke abantu. Ngokuvamile ngosuku olunjalo ithebula lezemikhosi libekwe, izivakashi zimenywa ukuthi zinikeza izipho, futhi kukhona umkhosi wokugcoba endlini. Kodwa-ke, ukukhathazeka kakhulu futhi kuhlale kunomhla wokuzalwa kwengane. Lokhu kubangelwa ukuthi izingane zibona wonke amaholide ngokucacile, ngakho-ke zidinga ukukhokha ngokukhethekile, futhi itafula lokuzalwa kwezingane kufanele libe lekhethelo, elibhekwa ngokucacile kwengane kanye neminye imikhawulo ekudleni.
Abanye abazali bakhetha indlela yokuphila enempilo futhi banakekele ngokukhethekile ukudla. Ngakho-ke, itafula lokuzalwa ngosuku ekuqondeni kwabo kumele libe nezithelo kanye namaqebelengwane asekelwe kuwo. Lesi simo sengqondo sokudla komntwana siyancomeka kakhulu, kodwa iqiniso liwukuthi itafula lihlelwe iholide eyenzeka kanye ngonyaka, kanti ingane ikhumbula izikhathi ezinjalo zokuphila.
Abanye bakholelwa ukuthi itafula lezingane lokuzalwa kufanele libe ngamaswidi kakhulu, ngoba bathanda izingane. Ngakho-ke, abazali bavame ukuhambisa amaqebelengwane, amaqebelengwane, ama-jellies, njll. Ngesikhathi esifanayo, abacabangi ukuthi ngokuyisisekelo zonke lezi izitsha ziqukethe ushukela, okulimaza umzimba ngobuningi futhi awuthandeki ekusebenziseni ebuntwaneni. Ngakho-ke, inhlanganisela yemikhiqizo kumele ibe nokulinganisela futhi ithwale impilo nenjabulo kubantwana.
Okufanelekile, itafula lokuzalwa kwezingane kufanele lifake izithelo ngisho nama-pie, futhi ungakhonza namaqebelengwane ngokuqukethwe okuphansi kwama-fat creams. Ungalawula ikhekhe lokugcoba esitolo se-confectioner, lapho uxoxisane kusengaphambili izingxenye zalo, ngakho-ke akusiyo nje okuhlwabusayo kodwa kuyasiza. Iziphuzo zithuthukiswa kangcono aziketshezi, ziphekwe emikhiqizweni yemvelo. Ngakho-ke, iziphuzo ezenziwe ekhaya noma iziphuzo zezithelo zilungile.
Itafula lezingane zosuku lokuzalwa akufanele liqukathe iziphuzo ezidakayo nekhofi, futhi kuyadingeka ukuqeda ngokuphelele umkhiqizo we-chocolate bese uzama ukunciphisa inani lemikhiqizo equkethe ushukela. Eqinisweni, ungasebenzisa noma yikuphi imikhiqizo efanelekayo kubantwana, kodwa kufanele ucabange ukuthi konke kufanele kube ukulinganisa.
Ngemuva kwetafula, kubalulekile ukwenza umhlobiso wayo. Kusukela ekuzalweni kwengane liholide lezingane, khona-ke izihlobiso kufanele zifaneleke. Kodwa-ke, ngaphambi kokunquma umbuzo "indlela yokuhlobisa itafula lokuzalwa komntwana," udinga ukunquma ngeqembu lobudala elizobe likhona kumcimbi ngokwawo. Iqiniso liwukuthi izingane ezincane zigijima njalo futhi azikwazi ukuhlala isikhathi eside, okusho ukuthi uma ukuhlobisa itafula kungcono ukuthi ungasebenzisi izibambo noma izinyoka, futhi kuyadingeka ukuthi ungahlanganisi amabhaluni eduze kwetafula.
Abazali abaningi bahlobisa itafula lezingane ngamathoyizi noma emifanekisweni ehlukahlukene, kodwa lapha kuyadingeka ukuba uqikelele ukuthi iqembu elithile labantwana likhona ukudonsa izinto ezincane emlonyeni. Ngakho-ke, ungasebenzisi ukuhlobisa izinto ezincane noma izidlo ezinomsoco ngezinto ezinjalo (amaqanda okushokoledi ngamathoyizi).
Itafula lezingane elihlelwe kahle lizoletha injabulo enkulu kumntanami bese ushiya izinto ezimnandi zokuphila.
Isakhiwo yesikhumbuzo: incazelo